‘टिम्बर क्राफ्टका ढोकाहरु वाथरुम, जस्केल र कौशीमा लगाउन मिल्ने छन्, यी ढोकाहरुमा मौसमी परिवर्तनले समेत कुनै असर गर्दैन् । - Timber Craft
‘टिम्बर क्राफ्टका ढोकाहरु वाथरुम, जस्केल र कौशीमा लगाउन मिल्ने छन्, यी ढोकाहरुमा मौसमी परिवर्तनले समेत कुनै असर गर्दैन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा मैले मेरो व्यवसायिक यात्राको क्रममा थुपै कम्पनीका ढोकाहरु बेचे जसमध्येको उत्कृष्ठ ढोका टिम्बर क्राफ्टको पाए
विगत १८ वर्ष देखि ढोक व्यवसाय गरिरहेका माधव ज्ञवालीको अनुभव गुल्मीमा जन्मिएका माधव ज्ञवाली हाल बुटवलका चर्चित ढोका व्यवसायी हुन् । उनले ढोकाको व्यवसायको सिलसिलामा बुटवल पश्चिमका प्राय जसो सबै जिल्लामा पुगिसकेका छन् । उनले २०६२ सालबाट यो व्यवसाय सुरु गरेका हुन् ।
वुटवलमा मनसुन प्लाई कम्पनी मार्फत ढोकाको वयापार गर्दै आएका माधव ज्ञवाली टिम्बर क्राफ्टका धेरै ढोका बेच्ने सेलर हुन् । उनलको व्यवसायीक यात्रा २०६२ देखि २०६८ सम्म नेपालको मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमतिर नै वित्यो । सुरुमा दाङमा भेनियर (सिमलको लफेटाबाट) ढोका उत्पादन गरेका उनी बर्दिया र कैलालीमा पनि बसेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘२०६२ साल देखि २०६८ साल सम्म म सुदुरपश्चिम तिरै बसे । यो समयमा मैले प्लाई र ढोका कसरि बन्छ, यसको क्वालिटी के हो ? भन्नेबारे केहि सिके ।’ सुदुरपश्चि भन्दा आफ्नै ठाँउ बुटवलमा केहि गर्छु भन्ने सोचले बुटवलमा फर्किएका ज्ञवालीले बुटवलमा ढोकाको बजारबारे गहन अध्ययन गरेको बताए । उनले भने, ‘बुटवलमा झरेपछि अरु काम भन्दा मलाई ढोका कै काम प्यारो थियो । जानेको पनि त्यहीं थियो । बुटवलका ढोका व्यापारीको कमजोरी के छ त ? भनेर खोजी गरें । सो क्रममा दूइ–चारवटा पसलहरुमा कहिले ग्राहक बनेर, कहिले साथी बनेर जादै गर्दा उनीहरुको कन्भिन्स पावर एकदमै कमजोर पाए । ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउने कुनै खुबि देखिएन । अनि मैले नयाँ योजना बनाए जुन थियो ग्राहकको खुशी नै ठुलो कुरा ।’ हरेक ग्राहकलाई ढोकाबारे प्रयाप्त जानकारी दिन थालेपछि उनको व्यापार निरन्तर बढ्दै गएको उनी बताउछन् ।
विश्वास नै सवैभन्दा ठुलो कुरा भएकोले हरेक ग्राहकको विश्वास जित्नतर्फ ज्ञवाली लागे । नेपाली बजारमा पाइने ढोकाबारे प्रतिक्रिया दिंदै उनले भने, ‘बजारमा थुप्रै प्रकारका ढोका छन् । बजारमा पाइने ढोकाहरु सस्तो देखि महंगो सम्म छन् । प्रत्येक बर्ष ढोकाको क्वालिटी परिवर्तन हुँदै गएको छ । आज जुन उत्पादन छ, त्यो उत्पादन एकवर्ष पछि या त डाउन भएर गएको छ, या त अपग्रेड भएको छ ।’ ढोका भन्ने बस्तु परिवर्तनशील भएको बताउदै उनले भने, ‘गुस्तर र डिजाइनमा ध्यान दिन नसक्ने हो भने कुनै पनि कम्पनी स्थायीरुपले ढोका बेच्न सक्दैनन् ।’ टिम्बर क्राफ्टसँगको भेटबारे जानकारी दिंदै ज्ञवालीले भने, ‘सुरुमा मेरो पसलमा टिम्बर क्राफ्टबाट राहुल जी जानुभएको थियो । उहाँले वुटवल क्षेत्रका धेरै व्यवसायी मध्ये मलाइ नै छान्नु भयो ।’ आफूलाई नै छानेपछि ढोकाको फुल अर्डर गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘राम्रो गुणस्तर भए दोश्रो अर्डर दिन्छु गुणस्तर नभएर दोश्रो पल्ट लिन्न भनेर माइन्ड मेकअप गरे । मलाई ढोका आयो । मैले ढोकाको परिक्षण गरे । मैले टिम्बर क्राफ्टका करिब १० वटा ढोका काटे र एकहप्ता पानीमा फाले, एक हप्ता घाममा फाले, पुस माघको महिना थियो जडो पनि पानीमा फाले । अरु ढोकाको जस्तो कुनै असर नदेखेपछि म ढुक्कले टिम्बर क्राफ्टका ढोका बेच्न तयार भएँ ।’
आफूसँग भएका चार–पाँच प्रकारका उत्पादन मध्ये सबैभन्दा राम्रो ढोका टिम्बर क्राफ्टको भएको उनको दावी छ । मेलै केहि ढोकाहरुमा कपडा धुने बनाएको छु तर डोर स्किन विग्रेको छ्रैन् । मेसोनाइट बराबरको डोर स्किन अर्को छैन् । उनले भने, ‘मैले निरनतर ढोका मगाइरहे बजारमा माग बढ्दै जाँदा माग धान्न पनि गाह्रो परिरहेको छ ।’ ढोका पहिलो नम्बरमा वाथरुम, जस्केलमा र कौशीमा लगाउने हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘टिम्बर क्राफ्टका ढोकाहरु वाथरुम, जस्केल र कौशीमा लगाउन मिल्ने छन्, यी ढोकाहरुमा मौसमी परिवर्तनले समेत कुनै असर गर्दैन् ।’ घाम, पानी र जाडो पनि हुने ठाँउमा टिम्बर क्राफ्टको ढोका लगाउन उनको सुझाव छ । टिम्बर क्राफ्टका ढोकाहरु एउटा घरको पाँच ठाँउको लागि मात्र बेच्न सकियो भने बजार धेरै भएको उनी बताउछन् । सबै घरमा सबै ढोकाहरु बेच्ने कोसिस गर्नुभन्दा पनि टिम्बरको ढोका एउटा पानी पर्ने ठाँउमा र एउटा घाम लाग्ने ठाँउमा बेच्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । यति गरेपछि त विश्वास आफै हुने उनले बताए । उनले भने, ‘टिम्बर क्राफ्टले के ध्यान दिनु जरुरी छ भने, जतिसुकै बलियो ढोका बनाए पनि बजारको माग अनुसार उत्पादन गर्नु जरुरी छ । उत्पादन बढाउन मेरो सुझाव छ । उत्पादन भएका ढोका ग्राहकले खोज्ने वित्तिकै पाइने गर्नु पर्यो । सेलर थप्नु जरुरी छ । पुराना सेलरहरलाई उपेक्षा नगरिदिनुहोला मेरो सुझाव छ ।’ उनले थपे, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा मैले मेरो व्यवसायिक यात्राको क्रममा थुपै कम्पनीका ढोकाहरु बेचे जसमध्येको उत्कृष्ठ ढोका टिम्बर क्राफ्टको पाए । अबको पुस्ताले खोजेको पनि यस्तै ढोका हो । प्लाष्टिक बेरेर बजारमा आएका ढोकाहरु एकवर्षमै जाने सम्भावना हुन्छ । कलर जान सक्छ तर टिम्बर क्राफ्टका ढोकाहरुमा त्यो समस्या छैन् । इच्छा अनुसार रङ फेर्न पाइयो । यो ढोकाको भविष्य छ ।’